ISHIDI LOKUKHOHLISA LOKUQONDA IZIVUMELWANO ZE-VPN - KUXHASIWE
Ishidi Lokukhohlisa Lokuqonda Izivumelwano ze-VPN
Kufanele ngabe uzwile ngezivumelwano ezahlukahlukene ngenkathi usebenzisa ama-VPN. Abaningi kungenzeka ukuthi bancome i-OpenVPN kuwe ngenkathi abanye kungenzeka ukuthi baphakamise ukuthi bazame i-PPTP noma i-L2TP. Kodwa-ke, iningi labasebenzisi be-VPN alikaqondi ukuthi ziyini lezi zinqubo, zisebenza kanjani, futhi zingenzani.
Okuqukethwe umbukiso 1 Ishidi Lokukhohlisa le-VPN 1.1 VulaVPN 1.2 I-L2TP 1.3 I-PPTP 1.4 SSTP 1.5 IKEv2
Ngakho-ke, ukwenza izinto zibe lula kini nonke, silungiselele leli phepha lokukhohlisa le-VPN lapho uzothola khona ukuqhathaniswa kwezivumelwano ze-VPN kanye nemininingwane ebalulekile ngalowo nalowo wabo. Sizobeka izikhombisi ezifingqiwe ngaphambi kokuba siqale, ngoba kuzosiza labo abafuna izimpendulo ezisheshayo.
Ngaso sonke isikhathi khetha i-OpenVPN njengoba iyi-VPN ethembeke kakhulu ngokwejubane nokuphepha.
I-L2TP iyindlela yesibili engcono kakhulu futhi isetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi abaningi be-VPN.
Bese kulandela i-SSTP eyaziwa ngokuvikeleka kwayo okuhle kepha awukwazi ukulindela isivinini esihle kuyo nakancane.
I-PPTP iyisinqumo sokugcina ikakhulukazi ngenxa yamaphutha ezokuphepha. Kodwa-ke, ingenye yezivumelwano ze-VPN ezisheshayo futhi ezilula kakhulu ongazisebenzisa.
Ishidi Lokukhohlisa le-VPN
Manje sizochaza ngayinye yezivumelwano ze-VPN ngawodwana, ngakho-ke ungafunda konke ngazo ngendlela eqondakala kalula:
VulaVPN umthetho olandelwayo ovulekile. Kuyinto nezimo ngokwedlulele uma kuziwa ukucupha on ahlukahlukene emachwebeni kanye ukubethela izinhlobo. Ngaphezu kwalokho, kufakazelwe ukuthi kuyiprotocol ethembeke kakhulu futhi evikelekile ye-VPN laphaya.
Sebenzisa: Njengoba ingumthombo ovulekile, i-OpenVPN isetshenziswa kakhulu ngamakhasimende wesithathu e-VPN. Iphrothokholi ye-OpenVPN ayakhelwe kumakhompyutha nakumadivayisi eselula. Kodwa-ke, kuya ngokuya kuthandwa kakhulu futhi manje sekuyiprothokholi ye-VPN ezenzakalelayo yezinsizakalo eziningi ze-VPN.
izilungiselelo ze-windows 10 azivuli i-2019
Ijubane: Iphrothokholi ye-OpenVPN akuyona inqubo esheshayo ye-VPN, kepha uma ubheka izinga lezokuphepha elinikezayo, ijubane layo lihle impela.
Ukuphepha: Iphrothokholi ye-OpenVPN ingenye yezivumelwano ezivikeleke kakhulu. Isebenzisa umthetho olandelwayo wokuphepha kwamakhasimende osuselwa ku-OpenSSL. Kuhle futhi maqondana ne-stealth VPN ngoba iyalungiswa kunoma iyiphi itheku, ngakho-ke ingafihla kalula ithrafikhi ye-VPN njengokujwayelekile kwe-intanethi. Ama-algorithm amaningi wokubethela asekelwa yi-OpenVPN okubandakanya i-Blowfish ne-AES, okubili okuvame kakhulu.
Ukulula Kokumiswa: Ukuhlelwa okwenziwa ngesandla kwe-OpenVPN akulula neze. Kodwa-ke, akudingeki ukuthi uyilungiselele ngesandla ngoba amaklayenti amaningi we-VPN asevele enenqubo elandelwayo ye-OpenVPN. Ngakho-ke, kulula ukuyisebenzisa ngeklayenti le-VPN futhi uncamela.
I-Layer 2 Tunnel Protocol noma i-L2TP iyi-tunneling protocol evame ukumataniswa nenye inqubo yokuphepha yokunikeza ukubethela nokugunyazwa. I-L2TP ingenye ye-protocol elula ukuyihlanganisa futhi yathuthukiswa yi-Microsoft ne-Cisco.
Sebenzisa : Kuyasiza ekutholeni i-intanethi ngokuphepha nangasese nge-VPN ngenxa yokuthungwa kwayo nokugunyazwa kokuphepha komuntu wesithathu.
Ijubane: Ngokuya ngejubane, empeleni inekhono futhi icishe isheshe njenge-OpenVPN. Kodwa-ke, uma uqhathanisa, womabili ama-OpenVPN ne-L2TP ahamba kancane kune-PPTP.
Ukuphepha: Iphrothokholi ye-L2TP ayinikeli noma yikuphi ukubethela noma ukugunyazwa kukodwa. Noma kunjalo, ingahlanganiswa nezinhlobonhlobo zokubethela nokugunyaza ama-algorithms. Ngokuvamile, i-IPSec ihambisana ne-L2TP ephakamisa ukukhathazeka kwabanye njengoba i-NSA isize ekwakheni i-IPSec.
Ukulula Kokumiswa: I-L2TP iyahambisana namadivayisi amaningi njengoba iningi manje selinokusekelwa okwakhelwe ngaphakathi kwe-L2TP protocol. Inqubo yokusetha ye-L2TP nayo ilula kakhulu. Kodwa-ke, itheku elisetshenziswa yilo mthetho olandelwayo livinjwe kalula yizicishamlilo eziningi. Ngakho-ke, ukuze ubazungeze, umsebenzisi udinga ukusebenzisa ukudluliselwa kwembobo okudinga ukusethwa okuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
Ukudonswa kwePoint-to-Point noma okwaziwa kakhulu njenge-PPTP yindala endala futhi ingenye yephrothokholi ethandwa kakhulu ye-VPN. Yakhiwe ekuqaleni yi-Microsoft.
Sebenzisa: I-PPTP VPN protocol isetshenziselwa womabili amanethiwekhi we-inthanethi kanye ne-intranet. Kusho ukuthi ungasebenzisa futhi umthetho olandelwayo ukufinyelela inethiwekhi yenkampani kusuka endaweni ekude.
Ijubane: Njengoba i-PPTP isebenzisa ukubethela okuphansi okujwayelekile kunikeza isivinini esimangazayo. Lesi yisona sizathu esikhulu esenza kube yiprotocol esheshayo ye-VPN phakathi kwakho konke.
amawindi ayi-10 anamathele kuma-99
Ukuphepha: Ngokuphepha, i-PPTP yiphrothokholi ye-VPN ethembeke kakhulu njengoba inikela ngezinga lokubethela eliphansi kunawo wonke. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukuthikamezeka okuhlukahlukene kule protocol ye-VPN eyenza ukuthi kube ephephe kunazo zonke ongayisebenzisa. Eqinisweni, uma ubakhathalele ubumfihlo bakho nokuvikeleka okukodwa, akufanele usebenzise le protocol ye-VPN.
Ukulula Kokumiswa: Njengoba kuyiphrothokholi endala futhi ejwayeleke kakhulu ye-VPN, kulula ukusetha futhi cishe wonke amadivayisi nezinhlelo zinikela ngokusekelwa okwakhelwe ngaphakathi kwe-PPTP. Ingenye yezivumelwano ezilula ze-VPN maqondana nokucushwa kwamadivayisi ahlukahlukene.
misa izibuyekezo ezizenzakalelayo windows 10 ekhaya
SSTP noma Protocol Socket Tunneling ubuchwepheshe bokuthengisa obakhiwa i-Microsoft. Iqale yakhelwa kwiWindows Vista. I-SSTP nayo isebenza kumasistimu asuselwa ku-Linux, kepha yayakhelwe kakhulu ubuchwepheshe be-Windows kuphela.
Sebenzisa: I-SSTP akuyona inqubo elusizo kakhulu. Impela iphephe kakhulu futhi ingazungeza izingodo zomlilo ngaphandle kokuhlupheka noma ubunzima. Noma kunjalo, isetshenziswa kakhulu ngabalandeli be-hardcore Windows futhi ayinayo inzuzo kune-OpenVPN, yingakho i-OpenVPN inconywa.
Ijubane: Ngokuya ngejubane, akusheshi kakhulu njengoba inikeza ukuphepha okunamandla nokubethela.
Ukuphepha: I-SSTP isebenzisa ukubethela okuqinile kwe-AES. Ngokwengeziwe, uma usebenzisa iWindows, khona-ke i-SSTP yiprothokholi ephephe kunazo zonke ongayisebenzisa.
Ukulula Kokumiswa: Kulula kakhulu ukusetha i-SSTP kumishini ye-Windows, kepha kunzima kuma-Linux based systems. IMac OSx ayisekeli i-SSTP futhi mhlawumbe ngeke ize.
I-Internet Key Exchange version 2 iyi-IPSec based tunneling protocol eyakhiwe yiCisco neMicrosoft bebonke.
Sebenzisa: Isetshenziswa kakhulu kumadivayisi eselula ngenxa yamakhono ayo amahle wokuxhuma kabusha. Amanethiwekhi wedatha yamaselula avame ukulahla ukuxhumana i-IKEv2 eza kahle kakhulu. Ukusekelwa kwe-protocol ye-IKEv2 kuyatholakala kumadivayisi we-Blackberry.
Ijubane: IKEv2 iyashesha ngokweqile.
Ukuphepha: IKEv2 isekela amazinga ahlukahlukene wokubethela we-AES. Kukhona ezinye izinhlobo zemithombo evulekile ye-IKEv2 etholakalayo futhi, ngakho-ke abasebenzisi bangagwema uhlobo lobunikazi beMicrosoft.
susa ngesandla amafayili wesikhashana windows 10
Ukulula Kokumiswa: Akuyona inqubo ehambisanayo kakhulu ye-VPN njengoba kunamadivayisi alinganiselwe ayisekelayo. Kodwa-ke, kumadivayisi ahambisanayo, kulula kakhulu ukumisa.
Ngakho-ke yilokhu konke odinga ukukwazi mayelana nezivumelwano ezivame kakhulu ze-VPN. Siyethemba ukuthi iphepha lethu lokukopela lezinhlelo ze-VPN likwazise futhi kwaba wusizo kuwe. Sazise uma uneminye imibuzo mayelana nanoma yiziphi izinqubo ezisesigabeni sokuphawula ngezansi.
ukusesha kwehhovisi 2016 akusebenzi
amawindi awakwazi ukuqinisekisa isiginesha yedijithali yamashayeli adingekayo kule windows windows 7
umbhobho uyeke ukusebenza ngemuva kokuvuselelwa kwamawindows 10
yini windows.old emafasiteleni 10